Nhau - Roller Bearings
Saizvozvowo yakavakwa sebhora mabheyaringi, roller mabheringi ane mutsetse wekubata pane kunongedzera kusangana, ichivagonesa iwo akakura kugona uye epamusoro kukatyamara kuramba. Iwo anotetereka pachawo anouya mune akati wandei maumbirwo, anoti, cylindrical, idenderedzwa, tapered, uye tsono. Cylindrical roller mabhegi anotarisira chete mashoma mashoma kutakura mitoro. Spherical roller mabheyaringi anogona kugadzirisa kusarongeka uye kuwedzera kukanda, uye, kana ikapetwa kumusoro, kukanda munzira. Tapered roller mabheyaringi anogona kubata akakosha kutakura mitoro. Tsono mabheyaringi, musiyano we cylindrical roller mabheyaringi, anokwanisa kubata yakakwira radial mitoro yehukuru hwayo, uye inogona kugadzirwa seyero roller kutambanudza mabhegi.
Roller mabheyaringi anowanikwa seyakazara-ekuzadza dhizaini uye tsono mabheyari angangoita zvisingaite anozove eaya maitiro. Tsono mabheyari anonyanya kushanda nekudzosera maitiro, asi kukakavara kunenge kwakakwirira nekuda kwe roller-kurwisa-roller kukwiza.
Paunenge uchishandisa cylindrical roller mabheyari pamasherufu ane angular misalignment, inosarudzirwa kushandisa maviri mapfupi roller mabhegi kumashure-kumashure-pane imwe chete yakareba roller inotakura.
Kusarudza Bhora kana Roller Kubereka
Semitemo yakajairika, mabheyari ebhora anoshandiswa pakumhanya kwakanyanya uye mutoro wakareruka kupfuura iwo mabara anotenderera. Roller mabheyari anoita zvirinani pasi pekuvhunduka uye kukanganisa kurodha.
Bhora mabheyari anowanzo kutengeswa semagungano uye anongotsiviwa sezvikamu. Roller mabheyaringi anogona kazhinji kukatanurwa uye anotakura anotakura uye anotenderera, kana ekunze kana emukati marudzi, akatsiviwa ega. Dzemumashure-mavhiri anotyaira mota anoshandisa kurongeka kwakadaro kwemavhiri epamberi. Kubatsira kweichi dhizaini ndechekuti iwo marudzi anogona kudzikiswa akakwana pamusoro pemiseve uye kupinda mudzimba kuti vagadzire magungano asingagumi pasina njodzi yekukuvara kune vanozvizungunusa ivo pachavo.
Yega-mutsara bhora mabheyari akaenzana uye anogona kushandiswa musingawirirane pakati pevagadziri. Roller mabheyari ari mashoma-epamutemo akamisikidzwa saka fananidzo inoda kubvunza mugadziri katarogu kuti isarudze imwe yakakodzera kunyorera.
Kutenderera-chinhu mabheyari anogadzirwa nehumwe huwandu hwekunze kwemukati. Chero kusarongeka kunongo sundira bhora kubva pachinzvimbo uye kubvisa chibvumirano chemukati hakufanirwe kukanganisa hupenyu hwekutakura. Roller mabheyari anonyanya kunetseka kune angular kusarongeka. Semuenzaniso, bhora rinotakura rinomhanya nespidhi ine mwero isina kunyatsosimba inogona kushanda zvinobudirira neakakanganisika zvisirizvo zvakakwira se0.002 kusvika 0.004 mukati ./in. pakati pekutakura uye shaft. Iyo cylindrical roller inotakura, mukuenzanisa, inogona kunge iri mudambudziko kana kusarongeka kwakapfuura 0.001 mukati ./in. Vagadziri vanowanzo kupa zvakagamuchirwa mamakisi emangular kusarongeka kune avo ega mabheyari.